Computer KTV system အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
Computer KTV system အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါ။
December 2013 in Other
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ ဆယ်လုံးလုံးကို ကာရာအိုကေ software ထည့်ပြီး သီချင်း ကိုတော့ ဆာဗာ တစ်လုံးထဲမှာပဲထည့်ပြီးလုပ်လို့ရမလားဗျ. ပြီးတော့ အဲ့စက် ဆယ်လုံးကို လဲထိန်းချုပ်မဲ့ စက်တစ်လုံးလဲ သုံးချင်ပါတယ်. print ပါထုတ်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လို software တွေ အသုံးပြုရမလဲနည်းလေးတွေ ရှိရင်လဲ ကူညီပေးကြပါဦးဗျ.
Can you use MI3 or MinNanDar Software.
Aung Thiha Zaw
မဂ်လာပါ ကျွန်တော်လည်း ကေတီဗီ မှာ computer လုပ်နည်းသိချင်ပါတယ် သင်ပေးပါလားဗျာ